A siddo miskiinkii | Apg29
Ha aad naftaada ha lagu siri iyo khiyaaneeyey?
Oo sidee ayaynu ku garanaynaa inay runtii waa miskiin ah oo wac oo ay adag haysaan? Malaha waxaa ka dambeeya wanaagsan horyaalka ah.
Yesterday u yeedhay nin Romanian ii aan laftiisa hadiyado. Waxa uu bilaabay hadalka isla markiiba ku jebiyey Swedish, laakiin weli arrin cadeeyo. Waxaa laga yaabaa in uu akhriyo ka hor warqada.
Mar kasta oo qof aanu magiciisa ma odhan, Waxaan sheeg yuu yahay. Laakiinse uma uu jawaabi laakiin sii hadlaya. Waxa uu bilaabay sheekooyin sob ah oo ku saabsan qoyskiisa, waxay ahaayeen kuwa buka kansar iyo lahaa runtii adag.
Anigu dhaqsaan u fahamsan yahay in uu kiiskaaga waxaa uu ahaa inaan dawarsadona lacag. Waxaan weydiiyay mar waxa uu ugu yeeray oo helay jawaab cidhiidhi ah haydh in magac oo aan innaba la fahamsan yahay midna, Ninkanu laga yaabaa. Waxaan weydiiyay halkaas oo uu ku noolaa oo loo sheegay Romania.
"Tahay inaad been!"
Dhab ahaantii, waxa uu soo jiidasho ku qaboojiyo in ay soo wac guriga si anfici Masiixiyiinta ah kuwaas oo aaminsan in Ciise si ay u baryid (iyaga khiyaanayn?) On lacagta. Waxay u badan tahay in surfed agagaarka shabaqa si aad u hesho dadka Masiixiyiinta ah la siri karo. Waxaan hore u heshay weynayd ee tuugsanaya. Oo sidee ayaynu ku garanaynaa inay runtii waa miskiin ah oo wac oo ay adag haysaan? Malaha waxaa ka dambeeya wanaagsan horyaalka ah.
No si suuqeeyaal
Markii hore, waxaan lahaa waqti adag leh u lahayn in ay suuqeeyaal oo doonaya in lagu sammeeyo on iga wax. Waxaan mar walba dareemay liita marka ay aragti ahayd in aan asal ahaan ahay doqon aan fahamsanahay in waxyaabaha ay tahay fursad dunida ee aan kaliya ma karaan daahid. Oo waxaan naftayda ha la oggolaysiin kari iyo iibsaday mid ka mid ah, dabadeedna waan dareemay in khiyaameeyay.
Laakiin hadda waxaan idinku leeyahay si toos ah dhulka kuma jiro in aan aan xiiseynaya. Laakiin waxay si kastaba ha ahaatee ay sii wadaan in ay ku hadlaan in ay isku dayaan in ay iga dhaadhicin, waxaan si degdeg ah ula shirkad laakiin nabdgelyo saaxiibtinimo oo qiilqiil kor u joojiyaan. Anigu iyaga ma siin fursad aadan.
Markii hore, waxa uu i siiyey qalbi xun, laakiin ma aha mar dambe sababtoo ah waxaan fahamsanahay in aan waa kii laga faa'ideysan iyo silica doonaa. Waxaan noqday xoog iyo aad u badan ayaa kalsooni dheeraad ah si ay u istaagaan noocan oo kale ah wax.
Sidaa darteed, waa in aad dhicin inuu mar dambe la odhan. Ha ogolaanin qofna inuu aad dareentid inferiority adag marka aad mar dambe la odhan. Adkaada ee aad go'aan Xukuntay weyn iyo dhiirranaan. Ha heli used. Oo aad tahay Christian a ma noqon yar Christian, haddii aad mar dambe la odhan.
Sii Ciise ayaa u!
Laakiin sidee samaynaa iyaga oo dawarsanayay lacag? In meesha ugu horeysa waxaan waa in iyaga siin injiilka Ciise si ay u heli kartaa isaga oo aanay u badbaadin iyo badbaadiyey for daa'in. Haddii kale, weligoodna ma ka heli doonaa qaar ka mid ah si ay noloshooda.
In meesha ugu horeysa, waxaan ku siin doonaa Ciise tuugsanaya ah! Oo mar labaad ayaan odhan: In meesha ugu horeysa, waxaan ku siin doonaa Ciise tuugsanaya! Markaas oo keliya ay ka fog beggary jebin kartaa! Markaas waxaad iyaga ku caawin kara bulsho.
Miyaanan Ciise, markaas gargaarka bulshada ma shaqeeyaan! Sidaa darteed, in aad marka hore waa in iyaga siin Ciise, markaas ayaa gargaarka bulshada!